Indawo eyingqayizivele ku-sue creek - I-Airbnb
Indawo eyingqayizivele ku-sue creek
Essex, Maryland, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Kathleen And Wayne
U-Kathleen And Wayne Ungumbungazi ovelele
Jabulela ifulethi lakho langasese kanye nesitezi emanzini noma woza uhlale phansi ngaseceleni kwamanzi futhi ubukele ama-Osprey, izindwandwe, amadada nokhozi ngezikhathi ezithile. Ukudoba endaweni yokudoba kanye nezikebhe ezincane ezingase zibe khona. Siseduze neklabhu yegalofu ye-Rocky Point, iklabhu ye-yacht yaseBaltimore, imizuzu engama-20 ukusuka eCamden Yards kanye nenkundla ye-M&T. Sikumizuzu engama-38 ukusuka e-BWI. Uzoba nendawo yokupaka yangasese endaweni ethule ephephile.
Ifulethi elizimele elingu-1 elinombhede olingana nenkosi kanye ne-futon ephindwe kabili egumbini lokuhlala. Iwasha umshini wokomisa, air conditioning nokushisa. Indawo yangasese enezihlalo netafula kanye nokubuka okuhle kwe-Sue Creek. Ikhishi eligcwele, HBO,
Isikhathi sombukiso, i-Wifi ifakiwe.
Sithatha izinyathelo zokuphepha ezengeziwe ngokuhlanza.
Ifulethi lihluke ngokuphelele endlini yethu, uyazihlolela kanye nedekhi yakho yangasese. Sinendawo enhle kakhulu yokuhlala phansi eduze kwamanzi futhi ungakwazi ukugeza ilanga noma udobe endaweni yokudoba. Woza futhi ujabulele i-Sue Creek enhle.
I-TV engu- 45" ene-I-Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, I-Netflix, ikhebula ye-premium
Indawo ethule, ephephile enezindawo zokupaka ezizimele.
Ibungazwe ngu-Kathleen And Wayne
Sihlala esizeni futhi sizotholakala ukuze sisize nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo maqondana nezindawo zokudlela nezikhangayo endaweni.
UKathleen And Wayne Ungumbungazi ovelele